ကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ်တို့ ရင်ခုန်သံ တွေ ဗြောင်းဆန် သွားအောင် ကိုယ်လုံးလေးကို လှုပ်ပြီး အမိုက်စားလေး ချပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ်တို့ ရင်ခုန်သံ တွေ ဗြောင်းဆန် သွားအောင် ကိုယ်လုံးလေးကို လှုပ်ပြီး အမိုက်စားလေး ချပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ်တို့ ရင်ခုန်သံ တွေ ဗြောင်းဆန် သွားအောင် ကိုယ်လုံးလေးကို လှုပ်ပြီး အမိုက်စားလေး ချပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
တည် ကြည် ရင့်ကျက် တဲ့ အလှ တရား တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆယ်စုနှစ်ကျော် အောင် ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှုတွေ ရရှိနေသူ က တော့ သရုပ် ဆောင် မင်း သမီး ချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်း ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … . သူမဟာ မြန်မာ ဆန်ဆန်လေး တွေကို ရိုးရိုး ယဉ်ယဉ်လေး တွေသာ ဝတ်ဆင် တတ်ပြီး ယောကျာ်းလေး ပရိ သတ် တွေရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ တွေကို သိမ်းပိုက် ရယူထား တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ မအေးသောင်း ဟာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား ကြီးများတွင် သာ မကဘဲ ရုပ်သံ ဇာတ် လမ်းများမှာ ပါ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေပြီပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
သူမ ရဲ့ ကိုယ် လုံး ကိုယ်ပေါက် လေးဟာလည်း အပြစ် ပြောစရာ မရှိအောင် ကို ကျစ်လစ် သွယ်လျ လှပလွန်း နေတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒီထက် ပိုပြီး လှပ နေစေရန် အတွက် လည်း Gym ဆော့ ကာ လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို ပုံမှန် လုပ်ဆောင်နေတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေကိုလည်း ဝေမျှ ပေး လေ့ရှိ ပြီး မကြာသေး ခင် နာရီ ပိုင်း လောက် ကလည်း အေးဝတ်ရည်သောင်း ရဲ့ Facebook Story လေးမှာ ဗီဒီယို လေးတစ်ခု တင်ထား တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
ဒါ က တော့ လေ့ ကျင့်ခန်း လုပ်နေတုန်း ဘေးက ကောင်လေး ဗီဒီယိုရိုက် နေမှန်း သိလို့ ခါးလေးကိုမထိ တထိ လှုပ်ခါပြ လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့ လေ့ကျင့် ခန်း လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဖက်ရှင် လေးကို ဝတ်ဆင် ထားပြီး Confident ရှိရှိ လှပလွန်းနေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ မနေ့ကမှ ဆံပင်ကောက် ထား တာ ကြောင့် လည်း မတူညီ တဲ့ ပုံစံသစ် လေးကို မြင် တွေ့ ရမှာဘဲ ဖြစ်တာ ကြောင့် ပရိသတ် တွေလည်း ကြည့်ရှု ခံစားနိုင် အောင် မအေးသောင်း ရဲ့ ဗီဒီ ယို ဖိုင်လေး ကို တစ်ဆင့် ပြန် လည် ကူးယူ တင်ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ် နော် … .
source and photo crd : Aye Thaung ’ s facebook account
တည္ ၾကည္ ရင့္က်က္ တဲ့ အလွ တရား ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ေအာင္ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပး မႈေတြ ရရွိေနသူ က ေတာ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ မင္း သမီး ေခ်ာေလး ေအးဝတ္ရည္ေသာင္း ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … . သူမဟာ ျမန္မာ ဆန္ဆန္ေလး ေတြကို ရိုးရိုး ယဥ္ယဥ္ေလး ေတြသာ ဝတ္ဆင္ တတ္ၿပီး ေယာက်ာ္းေလး ပရိ သတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ေတြကို သိမ္းပိုက္ ရယူထား တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ မေအးေသာင္း ဟာ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ႀကီးမ်ားတြင္ သာ မကဘဲ ႐ုပ္သံ ဇာတ္ လမ္းမ်ားမွာ ပါ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနၿပီပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
သူမ ရဲ့ ကိုယ္ လုံး ကိုယ္ေပါက္ ေလးဟာလည္း အျပစ္ ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ကို က်စ္လစ္ သြယ္လ် လွပလြန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒီထက္ ပိုၿပီး လွပ ေနေစရန္ အတြက္ လည္း Gym ေဆာ့ ကာ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြကို ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ သူမရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ေတြကိုလည္း ေဝမၽွ ေပး ေလ့ရွိ ၿပီး မၾကာေသး ခင္ နာရီ ပိုင္း ေလာက္ ကလည္း ေအးဝတ္ရည္ေသာင္း ရဲ့ Facebook Story ေလးမွာ ဗီဒီယို ေလးတစ္ခု တင္ထား တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ဒါ က ေတာ့ ေလ့ က်င့္ခန္း လုပ္ေနတုန္း ေဘးက ေကာင္ေလး ဗီဒီယိုရိုက္ ေနမွန္း သိလို႔ ခါးေလးကိုမထိ တထိ လႈပ္ခါၿပ လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ က ေတာ့ ေလ့က်င့္ ခန္း လုပ္မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး ဖက္ရွင္ ေလးကို ဝတ္ဆင္ ထားၿပီး Confident ရွိရွိ လွပလြန္းေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ မေန႔ကမွ ဆံပင္ေကာက္ ထား တာ ေၾကာင့္ လည္း မတူညီ တဲ့ ပုံစံသစ္ ေလးကို ျမင္ ေတြ႕ ရမွာဘဲ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြလည္း ၾကည့္ရႈ ခံစားနိုင္ ေအာင္ မေအးေသာင္း ရဲ့ ဗီဒီ ယို ဖိုင္ေလး ကို တစ္ဆင့္ ျပန္ လည္ ကူးယူ တင္ဆက္ ေပးလိုက္ ရပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post ရင်ခုန်နှုန်း တွေ ရပ်တန့် ပေးပါလို့ တောင်းဆို ရလောက်အောင် ဆက်ဆီ ကျပြီးမိမိုက် လွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ် လ် မလေး ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်
Next post ပုရိသေတွရဲ့ ရင်ခုန်သံကို မြန်သွားစေမယ့် အိန်ဂျယ်ကိုရဲ့ ဆက်ဆီကျတဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ